Uyicoca njani iXbox One console ngaphandle kokonakalisa - VidaBytes | LifeBytes
Uthungelwano kwiNethiwekhi | | Te knoloji
Elinye lawona macandelo abalulekileyo okuba neXbox kukuyigcina icocekile kwaye isebenza, ngakumbi ukunqanda ukonakaliswa kwangaphakathi kuthuli olwakhiwe. Apha siza kukufundisa indlela yokucoca iXbox One:
Ukucoca umphandle weXbox One, sebenzisa ilaphu le-microfiber ukususa iminwe, ubumdaka, okanye amanye amabala. Oku kufuneka kususe nothuli oluninzi oluhlala luqokelelwa kwizixhobo ze-elektroniki, ngakumbi ezo zigcinwe kwiikhabhathi okanye phantsi kwetafile kamabonakude.
Ukongeza kwinkangeleko yangaphandle, unokuqaphela ukuba ifeni yakho yekhonsoli yenza ingxolo ngakumbi emva kweeyure ezininzi zokusetyenziswa. Kweminye, lo msebenzi unengxolo ukhokelela kwimidlalo yokudlala ecothayo okanye eminye imiba.
Ukulungisa oku, sebenzisa itoti yomoya oxineneyo ukususa uthuli. Qiniseka ukuba ukhuphe isixhobo sakho ngaphambi kokuba uqalise ukucoca ukuze uphephe ukonakala okanye ukwenzakala.
IMicrosoft ayikukhuthazi ukuba uzame ukuvula ikhonsoli yomdlalo kwaye ikukhuthaza ukuba ufune uncedo lobuchwephesha kulo naluphi na ulungiso lwangaphakathi. Ngokungafaniyo ne-Xbox 360, iXbox One ayinaso isiseko esisuswayo. IMicrosoft ikwalumkisa ngokusebenzisa naluphi na uhlobo lokucoca ulwelo, njengoko nokusetyenziswa ngocoselelo kunokukhokelela ekonakaleni komswakama kwinkqubo yomoya yokungena.
Iingcebiso malunga nokucoca iXbox One
Nantsi indlela yokucoca iXbox One yakho, kunye nezinto oza kuyidinga ukuyenza.
Cima iXbox One yakho.
Qala ngokusebenzisa ilaphu le-microfiber ukucoca umphandle wonke. Ezi zihlala ziilinen ezifanayo zeelensi ezisetyenziselwa iiglasi. Ezinye iinguqulelo zokucoca zibizwa ngokuba ngamalaphu othuli.
Sebenzisa ilaphu ukucoca ngononophelo ngaphandle kweconsole yakho, kubandakanya umphezulu, ezantsi, umphambili, umva, kunye namacala esixhobo. Ukucoca rhoqo kuya kuthintela uthuli oluninzi ekuqokeleleni, olunokufuna amalaphu aliqela ukucoca isixhobo sakho. Sebenzisa imijikelo yokujikeleza ukuze uthambise izigxivizo zeminwe okanye ii-smudges kwiindawo zeplastiki zesixhobo sakho, kubandakanya umphambili nomphezulu.
Emva kokucoca umphandle weXbox One yakho, Sebenzisa itoti yomoya ocinezelweyo ukususa ngononophelo nakuphi na ukongezwa kothuli ngaphakathi kumazibuko. Ezi nkonkxa zingathengwa kwiindidi ezingabizi kakhulu okanye ezibiza kakhulu.
Nokuba ungasebenzisa uhlobo olunjaniSebenzisa ukuqhuma okufutshane ukususa ukwakhiwa kwizibuko elingasemva kunye neefestile zekhonsoli yakho. Qinisekisa ukuba ukhuphe isixhobo ngaphambi kokucoca amazibuko angasemva.
Phinda ujonge umphandle kwakhona ngelaphu ukususa uthuli oluzinzileyo kwisixhobo sakho.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ubomi beByte » Uyicoca njani ikhonsoli yakho yeXbox ngaphandle kokuyonakalisa
I-PS4 yeyona console yesibini ithengisa kakhulu ngalo lonke ixesha
Yenza ntoni i-Smart TV